कवाडीका सामानले ड्रोन र साइकल- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
कवाडीका सामानले ड्रोन र साइकल
मानिस प्रायः आफूलाई काम नलाग्ने/थोत्रा सामान फाल्छन्/बेचेर पठाउँछन्, जसलाई कवाडी सामग्री भनिन्छ  । यही कवाडी सामान बटुलेर वैज्ञानिक चेत भएका प्रतिभा निश्चल पौडलले ड्रोन बनाएका छन्  ।
सर्लाहीको जुटपानीस्थित नवजीवन मावि कक्षा १० का विद्यार्थी निश्चलले ड्रोन मात्र बनाएका छैनन् । ‘मैले अहिलेसम्म कवाडीमा फालिएका सामान बटुलेर पाँच वटा ड्रोन, ब्याट्रीबाट चल्ने साइकल र मौसमको अवस्था जानकारी दिने उपकरणहरू बनाएको छु,’ उनले भने, ‘जिज्ञासाले नै मलाई थप सिक्ने प्रेरणा मिलेको छ । युट्युब हेरेर, वैज्ञानिक सम्मेलनमा भाग लिएर र अग्रज वैज्ञानिकसँग भेटेर कुराकानी गरी उहाँहरूबाट प्रेरणा लिएर आफ्नो क्षमता बढाइरहेको छु ।’ क्रिएटिभ निश्चल नामको आफ्नै युट्युब च्यानल पनि उनले चलाइरहेका छन् ।
गाउँमै रहेको कवाडी पसलबाट विभिन्न पाटपुर्जा जम्मा पारेर आफूले बनाएको ब्याट्रीबाट चल्ने साइकल चढेर उनी ५ किमि टाढा रहेको स्कुलमा पढ्न जान्छन् । उनै निश्चललाई कार्तिकेय ट्रस्टले प्रदान गरेको कार्तिकेय बालप्रतिभा पुरस्कार गएको आइतबार काठमाडौंमा भएको एक समारोहमा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले वितरण गरे । कार्यक्रममा अन्य बालप्रतिभाहरू प्रोसेस पाण्डे (गायन), विजयसिंह वाइबा (चित्रकला), पुष्पा लोहनी (लेखन) र बालसाहित्य लेखकहरू विजय चालिसे, प्रमोद प्रधान, रेवती राजभण्डारी र कविता पराजुलीलाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा अग्रज र अतिथिहरूबाट स्याबासी पाएका निश्चलले दुई दिन काठमाडौं बसाइका क्रममा ब्राइट फ्युचर उच्च मावि नैकाप, क्यामेलिया स्कुल कालिमाटी, बाल व्यवसायी मावि र सिफल बालमन्दिरका विद्यार्थीमाझ ड्रोन उडाएर देखाउनुका साथै अन्तरक्रियासमेत गरे ।
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ११:४८
अघिल्लो शुक्रबार भदौ २० देखि धेरै विद्यालयका विद्यार्थी एकै मञ्चमा जम्मा भएर थुप्रै नाटक देखाइरहेका छन्  ।
विद्यार्थी उमेरमै रंगमञ्चप्रति रुचि जगाएर उनीहरूमा भएको प्रतिभालाई मौका दिन आरोहण गुरुकुलले १० दिने ‘विद्यालय नाटक महोत्सव’ गरेको हो । गुरुकुलको विराटनगरस्थित सुशीला कोइराला नाटकघरमा प्रस्तुत भइरहेका विभिन्न नाटकमा गरी सयभन्दा बढी विद्यार्थी कलाकारका रुपमा सहभागी छन् । केही नाटक विद्यार्थी आफैंले छलफल गरी विषयवस्तु छानेर तयार पारेका छन् । उनीहरूलाई शिक्षक र गुरुकुलका कलाकारले सघाएका छन् । त्यहाँ के कस्ता सन्देशमूलक नाटक देखाइए ? कुन नाटकमा को विद्यार्थी साथीहरू कलाकार छन् ? आऊ, यो पल्ट सुशीला कोइराला नाटकघर पुगौं :
समाजका कुरीतिविरुद्ध सचेतना, सकारात्मक सोचाइ राख्न प्रेरणा अनि अनुशासन र परिश्रमजस्ता पक्ष समेटेर रचिएका सन्देशमूलक कथालाई विद्यार्थीले रंगमञ्चमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । भदौ २० देखि सुरु आरोहण गुरुकुलको विराटनगरस्थित सुशीला कोइराला नाटकघरमा विद्यार्थीले तयार पारेका विभिन्न शीर्षकका नाटकहरू आजसम्म मञ्चन हुने छन् । महोत्सवको पहिलो प्रस्तुतिका रूपमा धीरज राईको लेखन तथा विकास पराजुली र राजेश ठाकुरको निर्देशनमा तयार पारिएको नाटक ‘म–नैतिक’ मञ्चन गरिएको थियो । भरत कार्की, दीपा पोखरेल, विजया नेपाल, राजेश ठाकुरलगायतले अभियन गरेको यो नाटकले नैतिकवान् हुन सिकाएको छ । लेखक राईले विद्यार्थीलाई नैतिक मूल्यमान्यता र समाजको वास्तविक चरित्रबीचको भिन्नतालाई नाटकमा प्रस्तुत गरिएको बताए । नाटकमा सहभागी विद्यार्थीले रंगमञ्चमा अभियन गर्दै सन्देश दिँदा कौतुहलसँगै रमाइलो लागेको बताए । महोत्सवमा विभिन्न ९ विद्यालयको सहभागिता छ । महोत्सव अवधिभर कलाकारका रूपमा सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी छन् । छात्राको संख्या उल्लेख्य रूपमा छ । प्रदर्शनका बेला आधाभन्दा बढी दर्शक पनि विद्यार्थी नै हुने गरेका छन् ।
महोत्सवमा सत्यनारायण स्कुलले अँध्यारो बाटो नामको नाटक प्रस्तुत गरेको छ । यसमा एउटा परिवारको छोरी आर्थिक समस्याबाट मुक्ति पाउन बेचिन पुगेको कथा छ । उनैको जीवनमा आधारित कथालाई अभिषा खड्का, मौनता कार्की, मल्लिका पराजुली, मानव बराल, एलिशा सुवेदीलगायत कलाकारले मार्मिक ढंगमा प्रस्तुत गरेका छन् । नाटकमा अभिनय गर्ने अभिषा र मौनताले आर्थिक समस्यामा परेको परिवारका छोरीले कस्तो समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने देखाएर समाजमा त्यस्ता व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्न नहुने सन्देश दिइएको बताए । ‘नाटकबाट राम्रा कुराहरू भन्न पाउनु धेरै रमाइलो हुने रहेछ,’ उनीहरूले भने । महोत्सवमा प्रदर्शित नाटकमा मौलिक नेपाली संस्कृति, सामाजिक पक्ष, नैतिक सन्देशमूलक कथाका साथै विभिन्न सामाजिक विकृतिमाथि व्यंग्य गरिने विषयवस्तुसमेत समेटिएका छन् । अधिकांश नाटकमा सकारात्मक सोचाइ लिन प्रेरित गर्ने खालका सन्देश छन् ।
विद्यार्थी बेलैदेखि रंगमञ्चमा रुचि जगाएर उनीहरूमा भएको प्रतिभालाई अवसर दिन आरोहणले १० दिने विद्यालय नाटक महोत्सव सञ्चालन गरेको अध्यक्ष भैरव क्षेत्रीले बताए । नाटकप्रति आकर्षित गर्न विद्यार्थीलाई मञ्चनको अवसर दिएको उल्लेख गर्दै उनले सहभागी विद्यार्थीमध्येबाटै भविष्यमा नयाँ प्रतिभावान् रंगकर्मी जन्मने विश्वास व्यक्त गरे । विद्यार्थी आफैंले छलफल गरी विषयवस्तु छानेर नाटक तयार पारेका थिए । उनीहरूलाई शिक्षकहरूले सघाएका छन् । आरोहणका कलाकारले पनि नाटक प्रस्तुतिका सन्दर्भमा नाटक तयारीकै क्रममा विभिन्न पक्षबारे जानकारी गराएका थिए । ‘महोत्सवमार्फत् हामीले विद्यालयतहमै नाटकको संस्कार विकास गर्न खोजेका हौं,’ आरोहण अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘यसले विद्यार्थीलाई सिर्जनात्मक बन्न प्रेरित गर्ने छ ।’
विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका ८ र रंगेली नगरपालिकाको १ विद्यालयले नाटक मञ्चन गरेका थिए । अन्नपूर्ण एकेडेमीले ‘मिहिनेत र परिश्रमको फल,’ पारागन एकेडेमी माविले ‘दसैं’ र सेन्ट जोसेफ स्कुलले ‘लक्ष्मीपूजा’ नाटक प्रदर्शन गरे । यसैगरी सप्तकोसी बोर्डिङ स्कुलले ‘छाउपडी’, बूढानीलकण्ठ स्कुलले ‘नासो’, लिलिपुटले ‘प्रधानमन्त्री’, श्रीश्री रविशंकर विद्या मन्दिरले ‘चण्डालिका एक अनन्त प्रेम कहानी’ र रंगेली नगरपालिकाको रञ्जनी एकेडेमिक स्कुलले ‘परिवेश’ नाटक प्रदर्शन गरे । महोत्सवले विद्यार्थीमा रंगमञ्चप्रति उत्सुकता बढाएको शिक्षकले बताए । अब विद्यालयमा पनि अतिरिक्त क्रियाकलापमा नाटकलाई प्राथमिकतामा राखेर अभ्यास गरिने महोत्सवमा सहभागी विद्यालयका शिक्षकले बताएका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ १३:१५